Soosaarayaasha budada is haysta & alaab-qeybiyeyaasha | Qurxinta Banffee
Qurxinta Banffee - Warshada Qurxinta Xirfadleyda& Soo saaraha Qurxinta La Habeeyay
Ku saabsan Banffee
Muqaal wax soo saar
Qalabka Dabiiciga ah
Alaabta Qurxinta dibnaha
dhalaal La'aan Bishimaha
Alaabta Isqurxinta Indhaha
Indho-shadow oo dhalaalaya
Alaabooyinka la isku qurxiyo ee wajiga
Budada is haysta
Budada Dejinta dabacsan
Guriga > Alaabta > Alaabooyinka la isku qurxiyo ee wajiga > Budada is haysta
Soo dir su'aashaada
3 Midab:KILFEbudada is haysta wuxuu leeyahay 3 midab laga bilaabo gacmeed ilaa midabyo qoto dheer. Midabo cad, qaawan, madow ayaa ku habboon dhammaan noocyada maqaarka. Wacanbudo is haysta oo raagaya iib, ku soo dhawaada nala soo xidhiidh.
Budada:Waxaa's ah matte khafiif ah oo jilicsan nooca budada is haysta. Waxay leedahay waxqabad wanaagsan oo ku saabsan xakamaynta saliidda iyo biyuhu. Waa midab aad u sarreeya, wuxuu si buuxda u dabooli doonaa ceebaha wejiga sida finanka, daloolada, nabar yar, iyo wixii la mid ah. Waxay leedahay hawlo la mid ah aasaaska iyo dejinta budada. Way fududahay in la sameeyo weji aan cillad lahayn.
Xidhmada:Budada waxay ku jirtaa palette madow. Banaanka waxaa ku yaal sanduuq warqad madow ah oo leh filim caag ah oo kulaylka lagu xiray.
Miisaanka: miisaanka saafiga ah 10g, miisaanka guud 70g.
Budada jumlada ah ee Banffee oo loogu talagalay qurxinta warshadda Banffee
Saliidda BILAASH AH, BUDO YAAREYNTA NUUR: Waxay bixisaa dhammaan maalinta oo dhan cillad la'aan oo leh kontorool iftiin leh. Budada noncomedogenic ee bilaa saliida ah ma xidhi doonto daldaloolada
Shirkadda Budada ee ugu Wacan - Banffee Makeup
Saliidda BILAASH AH, BUDO YAAREYNTA NUUR: Waxay bixisaa dhammaan maalinta oo dhan cillad la'aan oo leh kontorool iftiin leh. Budada noncomedogenic ee bilaa saliida ah ma xidhi doonto daldalooladaMAQAAL RAAR AH: Dharkayaga dheer ee 16-ka saac ah ee budada la tuujiyey weligood lama keegaa mana engegan doono mana dillaaci doono
Intro Banffee makeup is haysta qiimaha warshada budada OEM ODM
Calaamadaha budada cufan ee la riixay:Midabka sare, biyuhu-mareenka, waara, budada fican, xakamaynta saliida, maqaariyaha, dabool buuxa, cillad la'aan, matte, Midabo badan, Vegan, organic, naxariis daro, aan kicin, jilicsan, aan waxyeello lahayn, dabiici ah.Faa'iidooyinkayada:1. Hot Sale 5000 pcs waxaan u dhoofineynaa bil kasta suuqyada caalamka.2. Alaabooyinka tayada sare leh.3. Qiimaha la awoodi karo warshadda si toos ah u iibisa.4. Muunad laga heli karo kaydka.5. Delivery degdeg ah oo ku saabsan 7 maalmood.Ku soo dhawoow inaad nala soo xiriirto si aad u dalbato! Mahadsanid!
Astaanta gaarka ah ee gaarka loo leeyahay ee Banffee isqurxinta ee la riixay budada gaarka ah
Budada is haysta waxa ku jira palette madow oo xariif ah. Waxay ka kooban tahay isbuunyo qurxoon oo gudaha ah.Budadu waa khafiif, khafiif ah, khafiif ah. Waa xariir siman, oo ku habboon dhammaan noocyada maqaarka. Way fududahay in la qariyo daloolada ama wejiga kale ee aan cillad lahayn adiga oo isticmaalaya budada midabka sare leh. Waxaad si dhakhso ah u samayn kartaa qurxiyo jilicsan oo dabiici ah. Iyada oo aan biyuhu lahayn, dhididka caddaynta, jilayaasha xakamaynta saliidda, waxay ilaalin doontaa wejigaaga maalin dhan.Calaamadaha budada cufan ee la riixay:Midabka sare, biyuhu-mareenka, waara, budada fican, xakamaynta saliida, maqaariyaha, dabool buuxa, cillad la'aan, matte, Midabo badan, Vegan, organic, naxariis daro, aan kicin, jilicsan, aan waxyeello lahayn, dabiici ah.
OEM qurxiyo budada siman budada aasaaska ah oo leh 3 midab oo aasaaska wejiga aan biyuhu lahayn
Horudhac u ah Banffee cillad aan biyuhu lahayn ayaa ka yar Aasaaska leh astaanta astaanta budada ee haweenka aasaaska budada Banffee makeup
Aasaaska waxa ku jira dhalo labajibbaaran oo barafaysan. Waxay leedahay mug weyn oo 35ml ah iyo midabo kala duwan oo kala duwan 10 midab cad ilaa madow. Way fududahay in la arko midabada iyada oo loo marayo sharraxaad hufan.Aasaaska dareeraha ah wuxuu leeyahay khafiif, khafiif ah, budo khafiif ah. Waxay si fudud uga dhigi kartaa daloollada wejiga iyo cilladaha aan la arki karin. Waa xariir siman, oo ku habboon dhammaan noocyada maqaarka. Waxaad si fudud u samayn kartaa qurxiyo jilicsan oo dabiici ah. Waxay ka kooban tahay maaddooyin dabiici ah si ay wajigaaga u ilaaliso nafaqaynta iyo qoyaanka. Iyada oo aan biyuhu lahayn, dhididka caddaynta, jilayaasha xakamaynta saliidda, waxay ilaalin doontaa wejigaaga maalin dhan.Astaamaha aasaaskan:Midabka sare, biyuhu-mareenka, waara, budada fican, xakamaynta saliida, maqaariyaha, dabool buuxa, cillad la'aan, matte, Midabo badan, Vegan, organic, naxariis daro, aan kicin, jilicsan, aan waxyeello lahayn, dabiici ah.
Banffee 2021 budada is haysta ee iibka kulul ee ugu wanaagsan ee saamiga saamiga ee la heli karo aasaaska aasaaska qurxinta wajiga
Budada is haysta waxa ku jira palette madow oo xariif ah. Waxay ka kooban tahay isbuunyo qurxoon oo gudaha ah.Budadu waa khafiif, khafiif ah, khafiif ah. Waa xariir siman, oo ku habboon dhammaan noocyada maqaarka. Way fududahay in la qariyo daloolada ama wejiga kale ee aan cillad lahayn adiga oo isticmaalaya budada midabka sare leh. Waxaad si dhakhso ah u samayn kartaa qurxiyo jilicsan oo dabiici ah. Iyada oo aan biyuhu lahayn, dhididka caddaynta, jilayaasha xakamaynta saliidda, waxay ilaalin doontaa wejigaaga maalin dhan.Calaamadaha budada cufan ee la riixay:Midabka sare, biyuhu-mareenka, waara, budada fican, xakamaynta saliida, maqaariyaha, dabool buuxa, aan cillad lahayn, matte, Midabo badan, Vegan, organic, naxariis daro, aan kicin, jilicsan, aan waxyeello lahayn, dabiici ah.
Banffee oo tayo sare leh OEM is haysta budo jumlo ah oo qurxiyo sumad gaar ah oo la riixay
Banffee la riixay budada aasaaska ah ee budada matte iyo wejiga la riixay
2021 Summada Gaarka ah ee la riixay budada Concealer Foundation Waterproof Makeup Foundation Budada
Banffee budada wajiga ah oo leh funditon palette face makeup
banffee 3 midab xagaaga matte la riixay budada dejinta budada dhammaynaysa xakamaynta saliidda budada oo leh barar
Guangzhou Banffee Cosmetics CO
DAAREY IN AAD NALA SOO XIRIIRTO
Ciwaanka: Qolka 307, Dhismaha 4, No. 4, Xarunta Madaarka Greenland, Degmada Huadu, Guangzhou